Nabadda Waxbarashada Global Knowledge Clearinghouse - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
[Abriil 21, 2022] Maalinta Gaarka ah ee Dhulka waxay ku baaqaysaa wax ku biirinta mugga dib-u-qeexidda amniga caalamiga ah marka laga eego dhinaca dumarka Publications
[Abriil 17, 2022] Fariin ku socota dhammaan dowladaha xubnaha ka ah Qaramada Midoobay iyo Hogaamiyeyaasha Qaramada Midoobay (Ukraine) Digniinta Waxqabadka
[Abriil 15, 2022] Dagaalo dambe iyo mamnuucida hubka nukliyeerka ma jiro opinion
[Abriil 6, 2022] Bayaan ku saabsan Ukraine oo ka socda Kooxda Shaqada Waxbarashada Nabadda ee Iskaashiga Caalamiga ah ee Ka-hortagga Colaadaha Hubeysan Warar & Muuqaal
[Abriil 6, 2022] Jaamacadda DePauw waxay raadisaa Booqashada Kaaliyaha Professor ee Waxbarashada iyadoo diiradda la saarayo waxbarashada nabadda iyo colaadda Jobs
Nabadda Waxbarashada Cilmiga Caalamiga ah ee Nadiifinta
The Peace Education Global Knowledge Clearinghouse waa ururinta ugu weyn ee adduunka oo si joogto ah loo cusbooneysiiyo kheyraadka ku saabsan waxbarashada nabadda.
Ku saabsan & Talooyin ku saabsan Isticmaalka Guryaha Nadiifinta
Iyada oo xog-ururin la raadin karo ee manhajka waxbarashada nabadda, wararka, cilmi-baarista, warbixinnada, iyo falanqeyn laga sameeyay adduunka oo idil oo ay soo qabanqaabisay Ololaha Caalamiga ah ee Nabadda Waxbarashada iyo xubnaheeda, Clearinghouse waa xarun aqoon-cilmiyeed u tagta cilmi-baarayaasha, siyaasad-dejiyeyaasha, deeq-bixiyeyaasha, iyo tababarayaal.
Adeegsiga Guryaha Nadiifinta
Guji cinwaanka ilaha si aad u furto!
Shaandheeyeyaasha La Raadin Karo / La Sableyn Karo
Waxaad ka raadin kartaa Clearinghouse adoo adeegsanaya raadinta furan adoo isticmaalaya sanduuqa qoraalka. Intaa waxaa sii dheer, waad ka faa'iideysan kartaa saddexda miirayaasha la raadin karo iyo kuwa la kala sooci karo:
Categories sharax nooca ilaha. Waxaa jira ku dhowaad 20 qaybood oo waaweyn, oo ay ku jiraan manhajka, wararka, warbixinnada, ra'yiga, iyo cilmi-baarista.
Tags Sharax diiradda ilaha. Inta badan gelinta waxay lahaan doontaa astaamo dhowr ah. Waqtigaan la joogo, waxaa jira 700 + tags, oo kahadlaya mowduucyo kaladuwan oo ka socda # xuquuqda aadanaha illaa # barashada is-beddelka illaa # dhalinyarada nabadda dhista.
Wadan / Gobolka Aduunka waxay muujineysaa dalka / wadamada ama gobolka aduunku ujeedo ka leeyahay kheyraadka. Gobollada adduunku waxay ka muuqdaan DHAMMAAN CAPS.
Ku dhowaad 1800 soo gudbinta hadda, iyo 30-50 kheyraad cusub oo bil walba lagu daro, Clearinghouse ayaa si joogto ah u sii fideysa. The Clearinghouse sidoo kale waa shaqo socota. Kooxdayada mutadawiciinta ahi waxay si adag uga shaqeynayaan inay "calaamadeeyaan" maqaallada leh mawduucyada muhiimka ah iyo waddamada si ay uga dhigaan keydka xog uruurinta iyo ka shaqeynta cilmi-baarayaasha. Laga bilaabo Julaay 1, 2020 waxaan "calaamadeynay" ku dhowaad kalabar waxyaabahayaga ururinta. Waxaan had iyo jeer raadineynaa mutadawiciin gacan ka geysta ku darida waxyaabo cusub (waxaan heysanaa dib u dhac 100 + ilo ah oo diyaar u ah in lagu daro). Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku tabarucdo inaad taageerto mashruucan, iyo haddii aad leedahay waayo-aragnimo websaydh aasaasi ah (wordpress), fadlan nala soo xidhiidh.
Ku dar Kaydka
Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda wuxuu ku martiqaadayaa xubnihiisa inay ku biiriyaan wararka, cilmi baarista, manhajka, warbixinnada iyo falanqaynta Clearinghouse. Marka lagu daro soo bandhigida tabarucaadan halkan, waxaa sidoo kale lagu wadaagi doonaa websaydhka Ololaha, oo lagu qaybin doonaa liistada emaylkeena, laguna dhajin doonaa warbaahinta bulshada Halkan guji si aad ula wadaagto ilahaaga oo aad wax ugu biiriso Clearinghouse.
Wadan / Gobolka Aduunka